ပြတင်းတစ်ပေါက် (မြင့်သန်း) | လမ်းအိုလေး
April 1, 2012 by lanolay	Leaveacomment
ကျွန်တော် မဖြေတတ်ဘူး။ ခုထိတိုင်၊ ကျွန်တော် ဘာကို ပြန်ဖြေရမှန်း မသိဘူး။ လောကမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သော်မျှ နားမလည်နိုင်မယ့် ကိစ္စတွေရှိတယ်။ နှစ်ကာလတွေ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကြာကြာ။ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ရလာရလာ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ မီးရထားပေါ်က လှမ်းကြည့်ပြီး တွေ့ရတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေဟာ သူ့ရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေချည်းပါပဲ။
ပြတင်းတစ်ပေါက် (မြင့်သန်း) – ၁
ပြတင်းတစ်ပေါက် (မြင့်သန်း) – ၂
ပြတင်းတစ်ပေါက် (မြင့်သန်း) – ၃
ပြတင်းတစ်ပေါက် (မြင့်သန်း) – ၄
(A Window by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
Mandalay Icon Magazine – ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၁၂။)